Top 10 things to do after you install Drupal | mmshare
Submitted by Htet Htet on Mon, 03/19/2012 - 09:42
ကျွန်တော် က Drupal ကို လေ့လာဆဲ Beginner တစ်ယောက်ပါ။ ဒီ Post လေးကို တွေ့တော့ ကျွန်တော့်လိုပဲ Drupal ကိုလေ့လာနေတဲ့ အခြား Beginner တွေ တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးရှိစေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ကြိုးစားပြီး ရေးကြည့်တာပါ။ Senior အကို၊ အမ များကလည်း လိုအပ်တာလေးတွေကို ဖြည့်ပြီး ပြောပေးကြပါဦးနော်။
Make sure you have clean URLs enabled
Clean URL ဆိုတာ drupal ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ feature တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ URL ရဲ့ “?q=” အပိုင်းကို ဖယ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် user တွေအတွက် မှတ်သားရ လွယ်ကူသွားစေသလို Search Engine Optimization အတွက်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန် သွားစေပါတယ်။ ဥပမာ - http://www.mysite.com/?q=/node/1 ဆိုတဲ့ link ကို http://www.mysite.com/node/1 ဆိုပြီး ရှင်းလင်းသွားအောင် clean URL က လုပ်ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Drupal6နဲ့7မှာ install လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲ clean URL ကို enable လုပ်ပေးပါတယ်။ Drupal old version တွေမှာတော့ automatic မလုပ်ပေးပါဘူး။ Administer->Site Configuration-> Clean URLs ကို သွားပြီး Enable လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Senior အကို တစ်ယောက် က clean URL အကြောင်းကို ဒီလိုထပ်ဖြည့် ပြောပြထားပါတယ်။ “Drupal install လုပ်တဲ့အချိန် clean URL ကို auto enable မလုပ်ခင် apache ရဲ့ mod_rewrite module enable ဖြစ်မဖြစ် အရင် စစ်ပါတယ်။ mod_rewrite enable မဖြစ်ဘူးဆိုရင် Drupal က clean URL ကို enable မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ mod_rewrite enable ဖြစ်၊ မဖြစ် စိတ်ပူစရာတော့ သိပ်မလိုပါဘူး။ Hosting အများစု က enable လုပ်ပေးထားပြီးသားမို့ပါ။ တကယ်လို့ Drupal installation မှာ clean URL enable မရဘူးဆိုရင် mod_rewrite enable ဖြစ်၊ မဖြစ် Hosting ကို မေးကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။”
Clean URL ကို enable လုပ်ပြီးလို့ URL မှာ မျက်စိနောက်စရာ “?q=” ကတော့ ရှင်းသွားပါပြီ။ ခု Pathauto အကြောင်း နဲနဲပြောပါမယ်။ Drupal Help ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ node တစ်ခု ရေးမယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒီ node ရဲ့ url က http://www.mysite.com/node/75 ဖြစ်နေမယ့် အစား http://www.mysite.com/drupal-help ဆိုတာလေး က ပိုမကောင်းဘူးလား။ user တွေလည်း မှတ်မိလွယ်စေသလို URL မှာ drupal ,help စတဲ့ keyword တွေ ပါတဲ့အတွက် SEO အတွက်လည်း ပိုကောင်းသွားစေပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်သွားဖို့ Pathauto module လေး install လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
Pathauto module ကို ဒီနေရာ မှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Pathauto module ကို install, enable လုပ်ပေးရမှာပါ။
Pathauto module enable ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် node အသစ်တိုင်း အတွက် Default node path ပုံစံ content/[title-raw] နဲ့ path ကို auto ထုတ်ပေးသွားမှာပါ။ Default ပုံစံကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် Drupal6မှာ − Administer -> Site Building -> URL Aliases (admin/build/path/pathauto) - မှာ ပြင်လို့ ရပါတယ်။
Drupal7မှာဆိုရင် Configuration-> URL aliases မှာ setting ကို လိုသလို ပြင်လို့ရပါတယ်။ ဒီ အကြောင်း အသေးစိတ်ကို Kirsten.org ရဲ့ URL Aliases Settings အကြောင်းမှာ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါတယ်။
အခု content တွေ ဖြည့်ရင်း ဆက်လေ့လာ ကြည့်ကြရအောင်။ Drupal ရဲ့ default content type နှစ်ခု ကတော့ story နဲ့ page တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Create content -> story ,Create content-> page မှ content တွေ create လုပ်ရမှာပါ။ Default အနေနဲ့ content type “story” နဲ့ create လုပ်ထားတဲ့ node တွေရဲ့ introtext (summary)ကို front page မှာ publish လုပ်ပေးပါတယ်။ front page မှာ မပေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း Publishing Option မှာ သွားပြင်နိုင်ပါတယ်။
About Us လို static content တွေကို Content type “page” နဲ့ create လုပ်ပါတယ်။ page တစ်ခု အသစ်ယူပြီးရင် title ကို About Us လို့ပေးမယ်။ Menu Setting ရဲ့ Menu Link Title မှာလည်း About Us လို့ပဲပေးမယ်။ parent item ကို primary link ထားမယ်။ weight ကို0ပေးမယ်။ Body မှာ content ဖြည့်ပြီး save လုပ်ပြီးရင် ညာဘက် အပေါ် Primary Menu နေရာမှာ About Us Menu item တစ်ခု တိုးလာပါပြီ။
“page” အမျိုးအစား node တွေကိုတော့ front page မှာ မမြင်နိုင်ပါဘူး။ သူ့ကိုလည်း story လိုမျိုးပဲ Publishing Option မှာ ပြင်နိုင်ပါတယ်။
Add A Contact Me Form
User တွေနဲ့ အပြန်အလှန် interact ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် blog လေး ဖြစ်စေဦးတော့ ၊ contact page ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ Drupal မှာ contact page ကို အလွယ်တကူ create လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး Administrator->Site Building->Modules ထဲက contact module ကို enable လုပ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Administrator -> Site Building -> Contact Form မှာ category အသစ်တစ်ခုယူ ၊settings မှာ စိတ်ကြိုက် configure လုပ်ပြီး contact form တစ်ခု ဆောက်လိုက်ပါ။
Contact Us ကို Menu တစ်ခုအနေနဲ့ ရဖို့ဆိုရင်တော့ Administer -> Site building -> Menus -> Primary Links မှာ menu item တစ်ခု ယူရပါမယ်။ menu settings ရဲ့ path မှာ ခုနက ဆောက်ထားတဲ့ contact form ရဲ့ path ကိုထည့်ပေးပြီး link title မှာတော့ menu မှာမြင်ရချင်တဲ့ Contact Us ကိုထည့်ပေးပါမယ်။ Menu တစ်ခုလုံးရဲ့ ညာဘက်ဆုံးမှာ ပေါ်ချင်တော့ weight ကို5ပေးလိုက်မယ်။ Menu item တွေအားလုံးပြီးပြီ ဆိုမှ menu item list မှာ drag and drop လုပ်ပြီး Menu position ကို စိတ်တိုင်းကျ ပြန်ပြင်လို့လဲ ရပါတယ်။ ခုဆို Contact Us Menu နဲ့ contact form တစ်ခု ရပါပြီ။
sc (not verified)
Thu, 07/19/2012 - 01:50
I'm studying Drupal based on this tutorial. Thank you so much. :)
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနိုင်ပါစေ ။